असार १७ बाट मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ खुल्ने, जानौं कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ? – Eps Sathi
July 1, 2021 717
मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असार १७ गते (भोली) देखि आइपीओ नि’ष्काशन गर्ने भएको छ ।
संस्थाले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको ३ लाख ८९ कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । ३ लाख ८९ हजार कित्तामा ६ हजार ५८ कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र १९ हजार ४५० कित्ता सेयर म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याएको छ भने ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्तामा मात्रै सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन् ।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त आईपीओमा असार २१ गतेसम्म आवेद’न दिन सकिने छ । त्यस अवधिमा माग अनुसार आवेद’न नपरेको खण्डमा असार ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । लगानीकर्ताले सि आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ।
बजारमा उ’च्च मूल्य हुन सक्ने जीवन विकास लघुवित्तको आइपिओमा अहिले सम्म कतिले भरे? जानिराखौं
उक्त आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिईरहेका लगानीकर्ताहरुको संख्या हेर्दा कम्पनीको आईपिओमा १० कित्ता आवे’दन दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
लगानीकर्ताहरुले उक्त आईपीओमा छिटोमा असार १५ गते र ढिलोमा असार २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । संस्थालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले जेठ ३० गते आईपिओ नि’ष्काशनको अनु’मति प्रदान गरेको थियो । संस्थाले गत बर्ष फागुन १७ गते आईपिओ नि’ष्काशनको अनुमति माग गर्दै सेबोनमा नि’वेदन पे’श गरेको थियो ।
Prevकोरियाका ७० हजारभन्दा बढि स्टोरहरुमा अब बिटक्वाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने
Nextएउटै परिवारका बुवा र ३ छोरा पाइलट, सँगै उडाउँछन विमान, अहिलेसम्म ६५ हजार घण्टा विमान उडाएको राखे रेकर्ड